Fambolena – Mitaraina tsy ampy rano ny mpamboly eny amin’ny By-Pass - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fambolena – Mitaraina tsy ampy rano ny mpamboly eny amin’ny By-Pass
Tandindonin-doza ny fivelomana. Fianakaviana maro avy amin’ny kaominina telo, Alasora sy Ankaraobato ary Ambohi- janaka no manahy mafy amin’ny asa fambolena eny amin’ny By-Pass sy ny manodidina, amin’iny lalam-pirenena mampitohy an’Ambohimangakely (Rn2) sy Iavoloha (Rn7iny).
Tany 1 000 ha mahery no misedra olana amin’ ny tsy fahampian’ny rano. “Ny tohodrano mihitsy no tena lesoka. Tsy arifomba tsara ka tsy ahafahana manakana sy mitsinjara ny rano”, araka ny nambaran-dRazanamihaja Benarivo, Ben’ny tanànan’Alasora. “Maina ny tanimbary ka na voly avotra aza no atao dia tsy ahazoana vokatra araka ny tokony ho izy”, hoy indray ny fitarainan’ Andrianarisoa Edmond, mpamboly eny an-toerana. Misy amin’ireo mpamboly ihany koa no nilaza fa efa indroa namerina nanetsa. Tohadrano lehibe atao hoe Andriambato no mamatsy rano ireo tanimboly rehetra ireo. “Misy fanamboarana ataon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany isan-taona amin’ izy io. Ary izany no anaovana antso maika amin’ny tompon’ andraikitra satria mijaly ny mpamboly”, araka ny nambaran’ny Ben’ny tanànan’Alasora hatrany.
Fambolena, Mpanoratra Rijakely, 10.09.2012, 09:25	FIARAHAMONINA